Ogaden News Agency (ONA) – Dowlada Maraykanka oo Kahadashay Xaalada Qasan Ee Itoobiya.
Dowlada Maraykanka oo Kahadashay Xaalada Qasan Ee Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ July 28, 2017
Wasaarada Arimaha Dibada ee Maraykanka qaybteeda dhulka saxaraha kahooseeya ee Africa ayaa dhagaysi siwayn looga soo shaqeeyay kuqabatay magaalada Washinton ee caasimada wadanka Maraykanka.
Gudigan oo uu gudoomiye uyahay Congressman Chris Smith ayaa qabtay qaraar uu tirsihiigu ahaa H. Res. 128 waxaana dhagaysiga diirada lagu saaray dhaleecayn iyo dhaliil ay gudiga wasaarada arimaha dibada ee maraykanku usoo jeediyeen taliska wayaanaha.
Gudoomiyaha gudiga oo lagumagacaabo Chris Smith ayaa laga dhagaystay khudbad aad udheer oo uu kaga warbixinayay dhaqanka qalafsan ee xukuumada wayaanaha wuxuuna gudoomiyuhu carab baabay in aan loodul qaadan karin sida ay xukuumada wayaanuhu udhaqmayso.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in dadka shacabka ah ee Itoobiya kudhaqan loogaystay gabood falo aad uwaawayn, wuxuuna Chris Smith sheegay in lagaadhay xiligii wax laga qaban lahaa dhibka mudada dheer laguhayay shacabka ree Itoobiya.
Warbixinta gudiga ayaa lagu xusay in ay xaaladu faraha kasii baxday mudadii ay kacdoonadu socdeen, waxayna gudigu sheegeen in mudadii ay kacdoonadu socdeen ciidanka gumaysigu uu ahaa kuwo ufasaxan waxkasta oo ay doonaan.
Gudiga arimaha dibada ee Maraykanka qaybta Africa ayaa sidoo kale soo jeediyay talooyin dhowr ah oo ay kutaliyeen in lagu talaabsado si wax looga qabto xaaladaha qarafsan ee dadka wadanka Itoobiya kudhaqan ay kunool yihiin.
Talooyinka gudiga oo dhowr qodob kakoobnaa waxaa kamid ahaa in lahelo dowlad wadaag ah oo ay wadaleeyihiin dadka ree Itoobiya iyo in sifiican loola xisaabtamo kooxda gumaadka gaysatay ee TPLF.
Ma aha markii ugu horaysay ee gudi gaar ah ama dowlad kamid ah kuwa deeqaha siiya wayaanaha ay soojeediyaan talooyin ku aadan sidii xoriyad loogaadhsii lahaa dadka shacabka ah ee Itoobiya kutabaalaysan, waxayna xaaladu hada umuuqataa mid siwayn isha loogu hayo.